SURU S19 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ SURU Scrambler ကနေဒါကနေလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှထူးခြားတဲ့လျှပ်စစ် moped ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, 2011 ကတည်းကလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တဦးတည်း၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် Amarok ပြိုင်ပွဲ , ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝ monocoque လျှပ်စစ်အထူးဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ, အ Amarok P1 e-ပြိုင်ကားများတွင်အများအပြားအဖွဲ့များကအသုံးပြုခဲ့ပြီးတစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ။
[စာတန်းက id = “ attachment_3232” align = “ aligncenter” width ကို = “ 350” ] Amarok P1 လျှပ်စစ်အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ [/ caption]
အဆိုပါ SURU ဆိုင်ကယ်ကနေဒါကိုဖန်ဆင်း 100% နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ကနေဒါရင်းမြစ်ထားတဲ့နေသောပစ္စည်းများရဲ့ 60% ရှိပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. SURU ကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူအနေဖြင့်သားသမီးများ၏အမည်များရဲ့အတိုကောက်မိုက်ကယ် Uhlarik, တိုရွန်တို, ပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းမှာစက်မှုဒီဇိုင်းကိုလေ့လာတဲ့သူတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာဆုရမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဒီဇိုင်နာအပေါ်အခြေခံသည် အနုပညာတော်ဝင်ကောလိပ် ။
အဆိုပါ Scrambler အမှတ်တံဆိပ် SURU ၏ပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့က၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားကိုတီထွင်ထားတဲ့လျှပ်စစ် mobility ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စက်ဘီးနှစ်ဦးစလုံးထံမှအစိတ်အပိုင်းများကိုမျှဝေကျော်ဒါဟာစက်ဘီး-moped လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ moped စက်ဘီးခြေနင်းများနှင့်ကြီးမားသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘီး, ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ဘရိတ်ပေးထားပါတယ်။
“ SURU တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏ချွေး-အခမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားအတူစက်ဘီးအသုံးပြုမှုများ၏ပေါ့ပေါ့လွယ်ကူခြင်းပေါင်းစပ်။ ဒါကြောင့်များစွာသောလူကဖီးပြိုင်ကားသမားနဲ့ထုံးစံယဉ်ကျေးမှု၏အသွင်အပြင်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုင်ကယ်မှဆွဲဆောင်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သို့လာပြီစိုးရွံ့ခြင်းနှင့်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ SURU နာကျင်မှုမရှိဘဲစံပြတံခါးပေါက်ဖြစ်၏။ ”
အဆိုပါ Scooter က 32 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက်လျှပ်စစ်မော်တာ In-ဘီးတစ်ဦး 250, 500 သို့မဟုတ် 750 ဝပ်အားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 50-70km ၏အကွာအဝေးအဘို့ကို Sony ဖြင့်ဖြုတ်လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန် 3.5 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီခိုးယူကာကွယ်တားဆီးဖို့ lockable ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရထားဘီးပုံမှန်အစည်းအဝေး moped ဘီးထက်ပိုမိုအားကောင်းဒီဟာက 3x နေကြသည် 100 km / h မှာ rated နေကြသည်။ အားလုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ခေါင်းကိုအလင်း lumen vandalism.The 1600 ပျက်စီးခံရဖို့ကမဖြစ်နိုင်အောင်ဖို့ monocoque ဘောင်အတွင်းပေါင်းစည်းကြသည် built-in များနှင့်အပေါ်သော့ခတ်မထားပါ။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုအများပြည်သူ Scooter ခွဲဝေမှုအသုံးပြုမှုအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ Scooter ထိုကဲ့သို့သောလမ်း-ချွတ်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်အအေး (ဆီးနှင်း) တွင်သဲကန္တာရ, စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်မှာအဖြစ်ခက်ခဲတဲ့ enviroments မှာသုံးနိုင်တယ်။
အဆိုပါ Scooter တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်-grade ကို 110mm ဘရိတ်စည် (ရှေ့ဘီး) နဲ့တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘရိတ်၏အားသာချက်ကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုထုတ်လွှတ်မထားဘူးဆိုတာပါပဲ။
disc ကိုဘရိတ်ခြင်းဖြင့်လေထုညစ်ညမ်းမှု အိပ်ဇောအငွေ့ထက်လူသားတွေကိုပိုပြီးအဆိပ်သည်နှင့်တစ်ဦးစံမော်တော်ယာဉ်များကထုတ်လွှတ်သည့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများအထိ 20% disc ကိုဘရိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SURU Scrambler တစ်နောက်ဘက် disc ကိုဘရိတ်ကိုသုံးပါမနေစဉ်, ရှေ့ဘရိတ်လေထုညစ်ညမ်းမှုထုတ်လွှတ်မထားဘူး။ နောက်ဘက်ဘီးအတွင်းရှိလျှပ်စစ်မော်တာပါဝါ (ရုပ်ပျိုဘရိတ်) braking ပေး configured မည်ဖြစ်ကြောင်းသည့်အခါကနောက်ဘက် disc ကိုဘရိတ်ကို အသုံးပြု. skip နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများအများဆုံးအဆိပ်မျိုးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Scooter ကုန်တင်နှင့်ဖြန့်ဝေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အိတ်တင်ဆောင်လာသောတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter တိကျတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Scooter မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။
ကိုအရောင် swatch, အရောင်ရည်ညွှန်းကုဒ်, သို့မဟုတ်သင်ကိုချစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပို့ပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုက်ညီဖို့ SURU frame ကိုဖြစ်စေမည်။
ကို 2020 SURU Cycles ကိုမော်ဒယ်များ
SURU Cycles ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။